आज श्रावण २५ गते सोमबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ? - kageshworikhabar.com
आज श्रावण २५ गते सोमबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज मिति वि.सं.२०७८ साल श्रावण २५ गते । सोमबार। तपाईंको आजको राशिफल
परिवारका सदस्यसंग विवाद हुनसक्छ । छाती सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ। व्यर्थको खर्च हुनसक्छ । मानसिक तनाब बढ्ने छ । यात्रामा बिभिन्न समस्या आउन सक्छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । बौद्धिक चर्चा बढ्ने छ ।
गरेका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धीहरु पराजित हुनेछन् । सामाजिक दृष्टिकोणबाट सम्मान पाउनुहुनेछ। तर मध्यान्ह पछि झगडाको माहोल हुनेछ। तपाईंमा भएको साहस उत्साह कम हुनेछ । मान हानि हुन सक्ने हुदा सचेत रहनु होला
दिनको सुरुवातमा मनमा क्रोध पैदा हुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ अनुभव हुनेछ । विद्यार्थीहरुको लागि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुनसक्छ । तर मध्यान्ह पछि आफन्तसंगको भेटले मन प्रशन्न हुनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । भाइ बन्धुहरु संगको प्रेम बढ्ने छ । भाग्य वृद्धिको समय रहेको छ । कार्य सफलताको कारण मन प्रफुलित हुनेछ ।
दिन सुखमय रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । प्रियजन र साथीहरुसंग भेट हुनेछ । स्वादिष्ट भोजन हुनेछ । मध्यान्ह पछि परिवारमा कलह हुनसक्छ । मन स्थिर नहुनसक्छ । मनमा नकारात्मक विचार पैदा हुनसक्छ ।
बोलि र व्यवहारमा बिशेष संयमता अपनाउनु पर्नेछ । आफन्तबाट मन दुखाउने काम हुनसक्छ । सोचे भन्दा धरै खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यको बिशेष ध्यान दिनुहोला । मध्यान्ह पछी समय अनकुल हुनेछ । नयाँ कामको थालनी गर्न सक्नु हुनेछ। प्रियजनहरु संग रमाइलो भेट हुनेछ। काममा सहज हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ।
विभिन्न क्षेत्रहरुबाट लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ । व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ । सहकर्मीहरुको पूर्ण समर्थन पाउनुहुनेछ। साथि भाइहरु लागि गरेको खर्च लाभ दाएक हुनेछ। रिसलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला अन्यथा व्यर्थको विवादमा फस्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउन सक्छ ।
दिन एकदमै शुभ रहेको छ । धार्मिक कार्य र दिव्य दर्शनबाट लाभ हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने समय रहेको छ । उच्च अधिकारीहरुबाट प्रोत्साहन मिल्नुको साथै पदोन्नतिको संभावनाहरु रहेका छन् । प्रियजन तथा साथीहरुसंग भेटघाट हुनेछ। एक सुन्दर पर्यटन स्थलको भ्रमण हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ ।
दिन शुभ रहेको छ । धार्मिक कार्यमा मन जानुको साथै धार्मिक स्थलको भ्रमण हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रहरुमा लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि छ। वैदेशिक यात्राको लागी परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। उच्च अधिकारीहरु तपाईंको कामबाट खुसी हुनेछन् । पद बढ्ने असम्भावना रहेको छ । साथि तथा प्रिय मित्रसंग भेट हुनुको साथै रमाइलो यात्रा हुनेछ ।
कुनै पनि नयाँ कामको थालनी नगर्नु उचित हुनेछ । क्रोधलाई संयम राख्नुहोला अन्यथा परिवारका सदस्यसंग विवाद हुनसक्छ । मध्यान्ह पछि मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । परिवारमा आएको कठिनाइ कम भएर जानेछ । धार्मिक स्थलको यात्रा हुनसक्छ। भाग्य वृद्धिको सम्भावना रहेको छ ।
आफन्त र मित्रसरुसंग दिन रमाइलोमा बित्नेछ । सहभागिता लाभदायक हुनेछ। रमाइलो पलका यादहरुले मन प्रफुलित हुनेछ । मध्यान्ह पछि समय प्रतिकूल छ। शारीरिक र मानसिक रुपमा अस्वस्थ हुनुहुनेछ। नकारात्मक बिचारको कारण मन विचलित हुनेछ। परिवारमा विवाद हुन सक्छ।
दिन धेरै शुभ रहनेछ । व्यपार व्यवसयमा लाभ हुनेछ । शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ। दिन भर मनोरञ्जन गतिविधिहरुमा व्यस्त रहनुहुनेछ।
मनमा अशान्ति र उदेग छाउने छ । कुनै कारणले अचानक धन खर्च हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्य समस्य आउन सक्छ। मध्यान्ह पछि घरमा आनन्द र शान्ति को वातावरण रहनेछ। काममा सफलता मिल्नेछ। परिवारका सदस्यहरुसँग खुसीसाथ समय बित्नेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ।
Previous articleपूर्वकप्तान पारसको ७७ नंको जर्सी अन्य खेलाडीले प्रयोग नगर्ने
Next articleअधिकांश क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली, प्रदेश-१, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना